I-ExxonMobile Archives - Ilungelo Lethu Lase-US Lokwazi
ISayensi Media Center Ithuthukisa Ukubukwa Kwebhizinisi Lwesayensi
Posted on July 20, 2017 by UStacy Malkan
IScience Media Center (SMC) iyinhlangano ye-PR engenzi nzuzo eqale e-UK ethola indawo yayo enkulu kakhulu ye- imali evela embonini amaqembu. Abaxhasi bamanje nabangaphambilini kufaka phakathi iBayer, iDuPont, iMonsanto, iCoca-Cola kanye namaqembu okuhweba embonini yokudla namakhemikhali, kanye namaqembu ezindaba, izinhlaka zikahulumeni, izisekelo namanyuvesi. Imodeli ye-SMC isakazeka emhlabeni wonke futhi ibe nomthelela omkhulu ekwakheni ukusakazwa kwemithombo yezindaba ngesayensi, kwesinye isikhathi ngezindlela ezehlisa ubungozi bemikhiqizo noma ubuchwepheshe obunempikiswano. Leli phepha lichaza umlando we-SMC, ifilosofi, imodeli yezimali, amaqhinga nemibiko evela kubagxeki abathi i-SMC inikeza imibono yezesayensi yezimboni, isimilo i-SMC esiyiphikayo.
"I-Reuters ne-UN Cancer Agency" Ukuhlaziywa kokuthinteka kukaKate Kelland kwe-IARC, i-glyphosate kanye nomdlavuza, kanye nezibopho ezisondelene neSayensi Media Center.
Lo mbhalo weMonsanto ichaza izinhlelo zokubandakanya i-Sense About Science (inhlangano kadadewabo be-SMC), phakathi kwamanye amaqembu, njenge “Abalingani bemboni” kuhlelo lwe-PR lukaMonsanto ukudicilela phansi i-International Agency for Research on Cancer.
Isayensi Yokuphotha Yemboni: iphepha lamaqiniso ngoTrevor Butterworth kanye neSense About Science USA.
I-Science Media Centre yethulwa ngo-2002 iphendula “imisindvo yabezindaba mayelana neMMR, izitshalo zeGM kanye nocwaningo lwezilwane” ukusiza abezindaba bamele kangcono isayensi enkulu, ngokusho kwe iphepha lamaqiniso leqembu.
Esikhathini sawo sokuphila umbiko wokusungulaIScience Media Center ichaza ukuthi yadalelwa ukubhekana kanjani:
“inkinga yenkinga” ekhulayo emibonweni yomphakathi ngesayensi
ukuwa kwenhlonipho ngegunya nobungoti
umphakathi onganaki ubungozi nokusakazwa kwabezindaba okwethusayo futhi
“amasu abezindaba abonakala sengathi aphakeme kakhulu” asetshenziswa ama-NGO ezemvelo njengeGreenpeace neFriends of the Earth.
Ama-SMC azimele abelana nge umqulu ofanayo njengoba okwangempela manje kusebenza eCanada, e-Australia, eNew Zealand, eJalimane naseJapane, futhi ama-SMC ahlelwa eBrussels nase I-united states.
Imodeli yeSMC ibe nomthelela omkhulu ekwakheni ukusakazwa kwabezindaba ngesayensi. A ukuhlaziywa kwezindaba yamaphephandaba ase-UK ngo-2011 nango-2012 athola ukuthi iningi lezintatheli elisebenzisa izinsizakalo ze-SMC alifunanga imibono eyengeziwe ngezindaba zabo. Leli qembu futhi linethonya kwezepolitiki. Ngonyaka we-2007, iSMC yamisa ukuvinjelwa okuhlongozwayo kwemibungu ehlanganisa abantu / yezilwane ngomkhankaso wayo wezindaba wokushintsha ukusabalala kokukhathazeka kokuziphatha kuye ezinzuzweni zemibungu njengethuluzi lokucwaninga, ngokusho kwe ku-Nature.
Izifundiswa eziningana nabaphenyi bagxeke iSMC ngokuxosha imibono yenkampani yesayensi, nangokudlala phansi ubungozi bezemvelo nobempilo babantu bemikhiqizo nobuchwepheshe obunempikiswano. Imibiko ibhale ukuthambekela kwe-SMC yokuphusha imiyalezo ye-pro-industry futhi ngaphandle kwemibono ephikisanayo ngezihloko ezinjenge ukukhwabanisa, ukuphepha komakhalekhukhwini, Isifo sokukhathala okungamahlalakhona futhi I-GMO.
Ku-imeyili, uMqondisi weSMC uFiona Fox uthe iqembu lakhe alihambisani nomkhakha wezimboni: “Silalela ngokucophelela noma yikuphi ukugxekwa kweSMC emphakathini wezesayensi noma ezintatheli zezindaba ezisebenzela abezindaba base-UK kodwa asikutholi ukugxekwa ngokuchema komkhakha wezimboni kusuka kulaba ababambiqhaza. Siyakwenqaba ukusolwa ngokuchema kwemboni yezimboni futhi umsebenzi wethu ukhombisa ubufakazi kanye nemibono yabaphenyi besayensi abangama-3000 abaqavile kulwazi lwethu. Njengehhovisi labezindaba elizimele eligxile kwezinye zezindaba ezingundabuzekwayo zesayensi sikulindele ngokuphelele ukugxekwa ngamaqembu angaphandle kwesayensi ejwayelekile. ”
Izingcaphuno mayelana neSayensi Media Center
Izintatheli nabaphenyi ngethonya nobandlululo lweSayensi Media Center (ukugcizelelwa kufakwe kuzingcaphuno ezingezansi):
“Izikhungo zeSayensi Media ... seziphenduke abadlali abanethonya, kepha abanempikiswano emhlabeni wobuntatheli. Yize ezinye izintatheli zikuthola kuwusizo, ezinye zikholelwa ukuthi zithambekele kososayensi bakahulumeni nezimboni. ” Ukubuyekezwa kobuntatheli beColumbia
“Kuya ngokuthi ubuza kubani, (Umqondisi weSMC) UFiona Fox usindisa ubuntatheli besayensi noma ayibhubhise," U-Ewen Callway, Nature
“Ukwehla kwesibalo sezintatheli zesayensi zase-UK ezicindezeleke isikhathi asisayi emkhakheni wemba izindaba. Baya emihlanganweni ehlelwe kusengaphambili e-SMC… The ikhwalithi yokubika kwesayensi kanye nokwethembeka kolwazi olutholakala emphakathini konke lokhu kuhlupheke, kuhlanekezela ikhono lomphakathi lokwenza izinqumo ngengozi. ” UConnie St. Louis, iCity College yaseLondon, eCJR
“Inkinga akukhona ukuthi bathuthukisa isayensi, njengoba besho ukuthi benza, kodwa ukuthi bona khuthaza isayensi esebenza ngokuhlanganyela. " UDavid Miller, University of Bath, eSciDev
"Kulabo abangaphuphuthekiswanga yi-aura ekhangayo ye-SMC, kubonakala sengathi inhloso yayo ecashile ukuqinisekisa ukuthi izintatheli nabezindaba babika izindaba zesayensi nezokwelapha kuphela ngendlela yokuthi kuvumelana 'nenqubomgomo' kahulumeni nezimboni ezindabeni okukhulunywa ngazo. " UMalcolm Hooper, iYunivesithi yaseSunderland, iphepha leCFS / ME
“Kuyabonakala ukuthi i-ajenda ye-SIRC, i-SMC nezinhlangano ezihlangene ukuxhasa inqubomgomo yezomnotho kahulumeni wase-UK ukuthuthukisa ubuchwepheshe beBiotec kanye nezokuxhumana ngocingo. ” Iphepha likaDon Maisch kumaselula
"The Indima ye-SMC ibonakala ifaka umbono omncane of, ezimweni eziningi imibono emihle, yokuphepha kokuthwebula ama-fracking. ” UPaul Mobbs, Uphenyo Lwezemvelo lweMobbs
“Isikhungo sesayensi, esihlala singaziphethe kahle ngokwezepolitiki, sibonakala singahlosile ukuthi sivumele izintshisekelo zaso ukuba zimelwe emphakathini ngamalungu inethiwekhi yezombangazwe eyinqaba neyenkolo. " UGeorge Monbiot, The Guardian
Uxhaso Lwamabhizinisi LweScience Media Center
Isabelo esikhulu sezimali se-SMC, cishe ama-30%, sivela ezinkampanini nakumaqembu ezohwebo. Abaxhasi kusukela ngo-Agasti 2016 kufaka phakathi inqwaba yamakhemikhali, i-biotechnology, inuzi, ukudla, ezokwelapha, ezokuxhumana kanye nezimboni zezimonyo. Abaxhasi bezimboni zezolimo bahlanganisa iBayer, iDuPont, iBASF, iCropLife International, iBioIndustry Association kanye neChemical Industries Association. Abaxhasi bangaphambilini zifake iMonsanto, ExxonMobile, Shell, Coca-Cola neKraft. I-SMC nayo ithola uxhaso oluvela ezinhlakeni eziningi zezindaba, uhulumeni kanye nezifundiswa.
SMC kusho yona inikela ngeminikelo evela kunkampani eyodwa noma isikhungo kuya ku-5% wemali engenayo yonyaka ngemizamo “yokuvikela ethonyeni elingalungile” - kukhishwa imali engaphandle yeminikelo emikhulu evela ku-Wellcome Trust nakuhulumeni wase-UK Umnyango Webhizinisi, Amandla Nezimboni Isu.
Umlando We-SMC: “UMnyango Weqiniso Wokuqala waseBrithani”
Ngasekupheleni kweminyaka yama-1990, ubudlelwano phakathi kwesayensi nabezindaba base busezingeni elichachambile, kuchaza iSMC ividiyo yephromoshini. "Ngesikhathi sokutshalwa kweBSE, MMR, GM, kwakukhona umqondo wangempela ngaleli gebe phakathi kososayensi nabezindaba," kusho uFox kule vidiyo. I-SMC yadalelwa “ukusiza ukuvuselela ukwethembana komphakathi kwezesayensi ngokusebenzela ukukhuthaza ukumbozwa okulinganiselayo, okunembile futhi okunengqondo kwezindaba eziyimpikiswano zesayensi,” ngokusho kwayo umbiko wokubonisana.
Imibhalo eyisisekelo ye-SMC ifaka:
February 2000 Umbiko wekomidi leNdlu YeNkosi ichaza “inhlekelele yokwethembana” ebudlelwaneni bomphakathi nesayensi, futhi yancoma uhlelo olusha lwesayensi nabezindaba.
Septhemba 2000 “Indlela Yokuziphatha / Imihlahlandlela Yezokuxhumana Kwezesayensi Nempilo, ”YiRoyal Society and Social Issues Research Center (SIRC) incoma imihlahlandlela yezintatheli nososayensi ukuze kuliwe“ nomthelela omubi walokho okubhekwa 'njengezindaba ezesabisayo' ezingenasisekelo kanye nalezo ezinikeza amathemba angamanga kulabo abagula kakhulu. ”
2002 Umbiko Wokubonisana we-SMC ichaza inqubo yenhlolokhono nababambiqhaza abavela kuhulumeni, izimboni kanye nabezindaba abatshele ukuthi iSMC "izoyithatha kanjani i-gauntlet ephonswe phansi yiNkosi… yokuguqula isayensi ibe yizindaba eziphambili."
Umzamo weSMC waba nempikiswano ngokushesha. Umbhali uTom Wakeford wabikezela ngo-2001 ukuthi iSMC izoba “uMnyango Weqiniso Wokuqala waseBrithani lapho ababusi abaqanjiwe bakaGeorge Orwell bazoziqhenya ngabo.” Wabhala uMgcini, "Abantu abaphezulu kuHulumeni, iRoyal Society kanye neRoyal Institution bathathe isinqumo sokuthi ulwazi lwabo lomnotho olubaluleke kakhulu ludinga ukuthi kuncishiswe ukukhuluma ngokukhululeka." Uchaze i-Code of Practice: “Lo Mthetho uncoma ukuthi izintatheli zibonisane nochwepheshe abagunyaziwe, incwadi eyimfihlo okufanele inikezwe 'izintatheli ezibhalisiwe ezinemininingwane eqondile.'”
Iphrojekthi yokuqala ye-SMC - umzamo wokudicilela phansi ifilimu eqanjiwe le-BBC eliveza izitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo ngendlela engathandeki - liphakamise uchungechunge lwezihloko ezibucayi kwi-Guardian (umhleli we-Guardian wabhala nayo le filimu). Lezi zihloko zichaze iSMC njenge- “iqembu lokwamukela izivakashi zesayensi exhaswa izinkampani ezinkulu ezenza imithi namakhemikhali ”ebisebenza “Uhlobo lweyunithi yokuphika esheshayo yaseMandelsoni”Futhi ngisebenzisa“ ezinye amasu we-clumsiest spin weNew Labor ekuzameni ukwehlisa isithunzi (ifilimu) kusengaphambili. ”
UDick Taverne noSense Mayelana neSayensi
Umuzwa Ngezesayensi - umzamo wokucela ukwakhiwa kabusha kwemibono yesayensi - eyethulwa e-UK ngonyaka we-2002 kanye ne-SMC ngaphansi kobuholi buka-Lord Dick Taverne nabanye abanobudlelwano ne-SMC. U-Lord Taverne wayeyi-SMC Ilungu leBhodi Elilulekayo futhi yena kudalwe ngokubambisana ikhodi yokusebenza ye-SIRC.
Indaba ka-2016 ku-The Intercept nguLiza Gross uchaze i-Sense About Science nabaholi bayo “njengabaqaphi abazimele 'besayensi yomsindo'” abathi “balinganise izikali embonini.” UGross uchaze izibopho zomkhakha kagwayi zikaTaverne kanye nemizamo ye-PR yenkampani:
Ngokwamaphepha angaphakathi akhishwe ngamacala ngabakhiqizi bakagwayi, inkampani yababonisi bakaTaverne, iPRIMA Europe, isize iBritish American Tobacco ukuthuthukisa ubudlelwane nabatshalizimali bayo futhi shaya imithetho yaseYurophu ngogwayi ngawo-1990. UTaverne uqobo usebenze kuphrojekthi yabatshalizimali: Ku- imemo engenalo usuku, U-PRIMA uqinisekise inkampani kagwayi ukuthi "umsebenzi uzokwenziwa mathupha nguDick Taverne," ngoba ubekwazi ukubuza abaholi bezimboni futhi "uzofuna ukuqinisekisa ukuthi izidingo zomkhakha zibaluleke kakhulu ezingqondweni zabantu." Phakathi neminyaka eyishumi efanayo, uTaverne wayehleli ebhodini legatsha laseBrithani lenkampani yezokuxhumana yomphakathi iBurson-Marsteller, eyabiza uPhilip Morris njengekhasimende. Umqondo weqembu “lesayensi elizwakalayo”, elenziwe ngoxhaxha lososayensi ababezokhuluma bephikisana nemithethonqubo abantu bezimboni ababengenakho ukwethembeka ukuyiphikisa, kwakuyinkulumo uBurson-Marsteller ayenza kuPhilip Morris ku Imemorandamu yonyaka we-1994.
Phakathi kwamaphrojekthi ayo okuqala, iSense About Science ihlele incwadi evela ku- 114 ososayensi ukunxenxa uhulumeni waseBrithani ukuba "aphikisane nezimangalo ezingamanga" mayelana nama-GMO, futhi wenza inhlolovo ukugqamisa inkinga yokucekelwa phansi kwesivuno seGMO.
I-Sense About Science USA ivulwe ngo-2014 ngaphansi kobuholi besikhathi eside umlingani wemboni yamakhemikhali uTrevor Butterworth, kanye nabalingani be-Gates exhaswa ngemali yiCornell Alliance for Science, a Iqembu lephromoshini le-GMO.
Imisuka YamaKhomanisi Yezinguquko
Abaqondisi abasungula nabamanje beScience Media Center kanye neSense About Science - Umqondisi weSMC UFiona Fox kanye noMqondisi we-SAS UTracey Brown - nabanye ababandakanyeka nalawo maqembu, kubikwa ukuthi baxhunywe ngeRevolutionary Communist Party, iqembu leTrotskyist splinter elalihlelwe ngasekupheleni kweminyaka yama-1970 ngaphansi kobuholi besazi sezenhlalo UFrank Ferudi, ngokusho kwababhali UGeorge Monbiot, UJonathan Matthews, UZac Goldsmith futhi UDon Maisch.
Iqembu likaFerudi elihlukanise i-RCP lahlangana Ukuphila kweMarxism, Umagazini we-LM, I-Spiked Magazine futhi Isikhungo Semibono, owamukela ubungxiwankulu, ukuzimela futhi wakhuthaza umbono wezobuchwepheshe nokudelela abezemvelo, ngokusho kukaMonbiot. (UFerudi kuphendula kule ngcezu.) A Isihloko se-Guardian mayelana nomcimbi we-LM ngo-1999 uchaze inethiwekhi "njengempendulo ebhekiswe Kwesobunxele" (ngamazwi kaFuredi) enombono womhlaba wokuthi ukucabanga kwesokunxele "akuyona into yezepolitiki" futhi "ayikho enye indlela emakethe."
"Enye yezinto ezixakile kwezepolitiki yanamuhla wukubusa kwababengamaphiko kwesobunxele asebephendukele kwesokudla," kubhala uMonbiot ku Isihloko se-2003 Kuchazwa ubudlelwano phakathi kweSense About Science kanye neScience Media Center, abantu ababambe iqhaza kuleyo mizamo kanye nezixhumanisi zenethiwekhi ye-LM:
“Ngabe konke lokhu kwenzeke ngengozi? Angicabangi kanjalo. Kepha akulula ukuqonda ukuthi kungani kwenzeka. Ngabe sibheke iqembu elifuna amandla ngenxa yalo, noma elilandela ukwakheka kwezepolitiki, okuyisinyathelo esiphakathi kwalo? Engingakusho ukuthi isikhungo sezesayensi, esihlala singenapolitiki, sibonakala singahlosile ukuthi sivumele izintshisekelo zaso ukuba zimelwe emphakathini ngamalungu oxhumano lwezepolitiki oluyinqaba nolwehlukile. Esikhundleni sokwakha kabusha ukuthembela komphakathi kwezesayensi nakwezokwelapha, ifilosofi yaleli qembu enyanyekayo ekugcineni ingayiqeda. ”
I-SMC e-UK ithi inakho i-database enezingcweti ezingama-2700 kanye nezikhulu ezingaphezu kwezingu-1200 zabezindaba, kanye nohlu lwamakheli olunezintatheli ezingaphezu kwezingama-300 ezimele yonke imibhalo emikhulu yase-UK. I-SMC isebenzisa amaqhinga amathathu amakhulu ukuthonya ukusabalala kwesayensi, ngokusho kwayo ividiyo yephromoshini:
Impendulo esheshayo ezindabeni eziqhamuka nezingcaphuno zemibono: Lapho kuvela indaba yesayensi, “kungakapheli nemizuzu emingaki kukhona ama-imeyili e-SMC emabhokisini okungenayo awo wonke intatheli kazwelonke enikeza ochwepheshe,” kusho uFox.
Ukuthola izintatheli kuqala ngocwaningo olusha. I-SMC "inelungelo lokufinyelela kumajenali esayensi angaba ngu-10-15 ngaphambi kokuphakanyiswa kwama-embargo" ukuze bakwazi ukulungiselela ukuphawula kusengaphambili kochwepheshe bezinkampani zangaphandle okukhombisa ukuthi izifundo ezintsha ziyakudinga ukunakekelwa nokuthi kufanele zihlelwe kanjani.
Ukuhlela cishe i-100 press ngamafuphi unyaka "owabeka i-ajenda" ngokusobala ezihlokweni ezahlukahlukene zesayensi ezinempikiswano ezifana nodoti wenuzi, i-biotechnology kanye nezifo ezisafufusa.
Izibonelo zethonya nokuchema
Abaphenyi abaningana kanye nezifundiswa babike ukuthi bathi ukwenzelela kwe-SMC okuxhasa izimboni ngezihloko ezinempikiswano, kanye nokuthi izintatheli zithembele kangakanani emibonweni yochwepheshe be-SMC ukuhlela izindaba zesayensi.
Ukungabi nemibono ehlukahlukene
Uprofesa wobuntatheli uConnie St. Louis waseCity University, eLondon, uhlole umthelela weSMC ekubikeni kwesayensi emaphephandabeni kazwelonke ayi-12 ngo-2011 nango-2012, futhi wathola:
Ama-60% ama-athikili abika izithangami zabezindaba ze-SMC awasebenzisanga umthombo ozimele
Ama-54% okuphendula "kochwepheshe" anikezwe yi-SMC ekuqhamukeni kwezindaba ngalesi sikhathi esihlanganisiwe bekusezindabeni
Kulezi zindaba, ama-23% awasebenzisanga umthombo ozimele
Kulabo abakwenzile, kuphela ama-32% wemithombo yangaphandle enikeze umbono ophikisayo kulokho okunikezwa ngungoti ekuphenduleni kwe-SMC.
"Kunezintatheli eziningi kunokuba kufanele ngabe zisebenzisa kuphela ochwepheshe be-SMC hhayi ukuxhumana nemithombo ezimele," kuphetha uSt.
Ochwepheshe akubona njalo ososayensi
UDavid Miller, uprofesa wesayensi yezenhlalo evela e-University of Bath, e-UK, uhlaziye okuqukethwe kwe-SMC kuwebhusayithi kanye nezicelo ze-Freedom of Information Act, futhi wabika:
Abanye ochwepheshe be-SMC abangama-20 kwabangu-100 abacashunwe kakhulu kwakungebona ososayensi, njengoba kuchazwa ngokuba ne-PhD nokusebenza esikhungweni sokucwaninga noma emphakathini ophakeme kakhulu, kepha babengama-lobbyists kanye nama-CEO amaqembu amaqembu embonini.
Imithombo yezimali ibingadalulwa njalo ngokuphelele ngesikhathi esifanele ku-inthanethi.
Kwakungekho bufakazi bokuthi iSMC yayivuna umxhasi othile, kodwa yayithanda imikhakha ethile yezinkampani nezihloko ezazikhuluma ngazo “kukhombisa izinto eziza kuqala zabaxhasi bazo.”
“Uma uthi ucaphuna ososayensi bese ugcina usebenzisa ama-lobbyists kanye nama-NGO, umbuzo uthi: ngabe ukhetha kanjani ukuthi yiliphi ama-lobbyists noma ama-NGO okumele abe nawo? Kungani ungenawo ama-lobbyist aphikisana nokuhlolwa kofuzo noma amalungu e-Greenpeace aveza umbono wawo kunesikhundla se-bioindustry? Lokho kuveza ngempela uhlobo lokuchema olusebenzayo, ”kusho uMiller.
Strategic spin triumph emibungwini yabantu / yezilwane e-hybrid
Ngo-2006, lapho uhulumeni wase-UK ecabanga ukuvimbela ososayensi ekwakheni imibungu ehlanganiswa nabantu-yezilwane, iSMC yahlanganisa imizamo yokususa ukugxila ekusakazweni kwabezindaba kude nezinkinga zokuziphatha nokubheka ukubaluleka kwemibungu ehlanganisiwe njengethuluzi lokucwaninga, ngokusho ku-Nature.
Umkhankaso we-SMC "wawunqobe amasu ebudlelwaneni bezindaba" futhi "ububhekele kakhulu ukuguqula isimo sokutholakala kwemibungu eyizilwane ezingabantu," ngokusho kuka-Andy Williams, umcwaningi wezindaba e-University of Cardiff, e-UK, owenza ukuhlaziywa egameni le-SMC kanye nabasizi bomkhankaso.
Imithombo engaphezulu kwama-60% ezindabeni ezibhalwe yizintatheli zesayensi nezempilo - leyo okubhekiswe kuyo yi-SMC - isekele ucwaningo, futhi yingxenye eyodwa kuphela yekota yemithombo ephikisana nalokhu.
Ngokuphambene nalokho, izintatheli ebezingakahlosiwe yi-SMC zikhulume nososayensi abambalwa abasekelayo kanye nabaphikisi abaningi.
"UWilliams manje ukhathazekile ngokuthi imizamo ye-SMC iholele izintatheli ukuthi zinikeze isithunzi ososayensi ngokweqile, nokuthi zavimbela impikiswano," Indatshana Yemvelo ibikile. Ingxoxo noWilliams in SciDevNet kubika:
"Ulimi oluningi olusetshenzisiwe ukuchaza [izithangami zabezindaba ze-SMC] kugcizelela ukuthi babeyithuba lokuthi ososayensi bachaze isayensi ngamagama abo, kodwa - okubaluleke kakhulu - ngendlela engathathi hlangothi futhi engenaxabiso," esho. Kepha lokhu akulinaki iqiniso lokuthi le micimbi ibiphethwe ngokuqinile icindezela ukulandisa okukholisayo, engeza, nokuthi isethelwe ukuvikela umthelela omkhulu kwabezindaba kososayensi ababandakanyekayo. Izintatheli ezingongoti bezesayensi zondliwe "yimixhaso yolwazi" yi-SMC futhi zinamathuba amaningi kakhulu kunezinye izintatheli ukucaphuna imithombo yokuvikela ukuxubana, kusho uWilliams.
Ikhuthaza ukubukwa kwemboni ku-fracking
Ngokombiko othile Februwari 2015 ukuhlaziywa kwezindaba olwenziwe nguPaul Mobbs we-Mobbs 'Environmental Investigations, i-SMC yanikela ngamazwibela amaningi ochwepheshe mayelana ne-fracking phakathi kowezi-2012-2015, kepha idlanzana lososayensi ababephethe ukuphawula kwakusuka ezikhungweni ezinobudlelwano bezezimali nemboni kaphethiloli noma amaphrojekthi ocwaningo axhaswe imboni.
“Iqhaza le-SMC libukeka lifaka umbono omncane emibonweni emincane yezimvo zokuphepha kwe-fracking. Le mibono isuselwa esikhundleni sobungcweti salabo abathintekayo, futhi ayisekelwa ngezikhombo zobufakazi ukuqinisekisa ubuqiniso bayo. Ngenxa yalokho, le mibono iye yacashunwa kwabezindaba ngaphandle kokungabaza. ”
“Mayelana negesi ephuma emanzini, i-SMC ayinikezi umbono olinganiselayo ngobufakazi obutholakalayo, kanye nokungaqiniseki, ngemithelela kawoyela negesi engajwayelekile. Inikeza izingcaphuno ezivela ezifundweni ezimele kakhulu umbono 'wase-UK', ongabunaki bonke ubufakazi obutholakala kulolu daba obuvela e-USA, Australia naseCanada. ”
Ukwehlisa isineke ukukhathala okungamahlalakhona
A Iphepha le-2013 nguMalcolm Hooper, uProfesa Wezokwelapha e-Emeritus, e-University of Sunderland, e-UK, usole iSMC ngokuthuthukisa imibono yabanye abasebenza kwezokwelapha, ngokwehluleka ukubika ngesayensi yezinto eziphilayo kanye nokuphokophela "imibono kanye nenkulumo-ze yamaqembu anentshisekelo enamandla" emithonjeni yayo yezindaba sebenza ku-chronic fatigue syndrome / myalgic encephalomyelitis (CFS / ME).
Iphepha likaHooper libika ngezixhumanisi eziphakathi kwe-SMC nabadlali abalulekile empikiswaneni yeCFS / ME nezixhumanisi zemboni yomshuwalense, futhi linikeza ubufakazi balokho uHooper akuchaze njengomkhankaso weSMC wokudicilela phansi abantu ngeCFS / ME, kanye nemizamo yayo yokudicilela phansi iPACE imiphumela yesivivinyo kwabezindaba. Uyaphetha, "Inhlangano eziphatha ngendlela engqubuzana nesayensi ngale ndlela ayinakuba nesicelo esisemthethweni sokumela isayensi."
Ukubukwa kwe-SMC, bheka Ishidi lamaqiniso lango-2018 ku-CFS / ME “ukugula nokuphikisana.”
Ukuphepha kwamaselula nabaxhasi bezingcingo
A Iphepha le-2006 nguDon Maisch, PhD, "kuphakamisa ukukhathazeka okukhulu ngokungakhethi kwemodeli yeSMC kwezokuxhumana kwezesayensi lapho kunikezwa izeluleko zochwepheshe ezindabeni ezinengxabano lapho izintshisekelo ziyingxenye yohlaka lweSMC." Iphepha leMaisch lihlola ukuxhumana kwamaSMC ezindabeni ezibandakanya imisebe kagesi kagesi kanye nokuphepha komakhalekhukhwini, futhi linikeza lokho akubiza ngokuthi "umlando ongacwaningwa wemodeli yeSMC yokuxhumana kwesayensi."
“Kusobala ukuthi i-ajenda ye-SIRC, i-SMC nezinhlangano ezisebenzisanayo ukuxhasa inqubomgomo yezomnotho kahulumeni wase-UK yokuqhakambisa ubuchwepheshe be-Biotec nobuchwepheshe bezokuxhumana. Lokhu kungachaza ukuthi kungani abantu abangenazo iziqu zangempela kwezokuxhumana kwezesayensi bekwazile ukufinyelela ezikhundleni ezaba ubuso bomphakathi bezikhungo zesayensi zaseBrithani. Ibuye ichaze ukuthi kungani isikhungo sezesayensi nezokwelapha sase-UK, sazi ukuthi ingxenye enkulu yemali yesayensi ivela emithonjeni yezimboni, ingabalingani abazimisele ukuvumela izinhlangano ze-PR ezine-ajenda enqunywe kusengaphambili ukuthi zibakhulumele futhi zisekele inqubomgomo yezomnotho kahulumeni kunentshisekelo yomphakathi . ”
Njengokwehliswa ngenhla, bobabili iScience Media Center neqembu lodadewabo iSense About Science bethule ngamaphrojekthi avikela ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo. I-SMC ivame ukunikeza ochwepheshe abagxeka izifundo eziveza ukukhathazeka ngama-GMO. Izibonelo zifaka:
Ngo-2016, ososayensi baphindisela emuva ekuphenduleni kochwepheshe be-SMC abathi babekhuluma kabi ngomsebenzi wabo kuma-GMO. Ucwaningo oluholwa nguMichael Antoniou, PhD, iNhloko yeGene Expression and Therapy Group, eKing's College London School of Medicine, futhi lwashicilelwa ku Imibiko yeSayensi, wasebenzisa ukwenziwa kwamangqamuzana ukuze aqhathanise ummbila we-GMO nozakwabo ongeyona i-GM futhi wabika ukuthi ummbila we-GM nowe-GM "awalingani kakhulu." I-SMC ikhiphe i- ukusabela kochwepheshe ukuhlambalaza isifundo, futhi bekungavumeli ababhali ukuthi baphendule noma balungise imininingwane enganembile ekukhishweni kwe-SMC, ngokusho kwabalobi bezocwaningo.
“Lawa mazwana [acashunwe ekukhishweni kweSMC] awanembile ngakho-ke asabalalisa ulwazi olungelona iqiniso ngephepha lethu. Sazisiwe ukuthi akusiyo inqubomgomo yeScience Media Centre ukuthumela izimpendulo, ezifana nezethu, kumazwana okuphawula abawathumelayo / abawabeka kwiwebhusayithi yabo, ”kusho u-Antoniou. Ababhali bokufunda bathumele impendulo yabo lapha.
Intatheli uRebekah Wilce ibike kanjalo ku-PR Watch ngo-2014 ngezibonelo eziningana zokuchema kwe-pro-GMO kwezokuxhumana ze-SMC. Wabhala:
I-SMC izibiza ngesikhungo esizimele sokuxoxisana nabezindaba ngezindaba zesayensi. Abagxeki, nokho, bayakungabaza ukuzimela kwayo kusuka embonini ye-GMO - yize isitatimende seqembu ukuthi inkampani ngayinye noma omunye umxhasi anganikela kuphela ngamaphesenti amahlanu emholweni weqembu wonyaka - futhi axwayise ukuthi le nhlangano ibheke ngaphesheya kwechibi iye e-United States ukuhlinzeka nge-GMO spin lapha.
I-SMC kwahola impendulo ocwaningweni luka-2012 olubika ukuthi ukuthola izicubu ezilwaneni zaselebhu zondla ama-GMO esifundweni sesondlo sesikhathi eside. Ucwaningo luye lwahlazeka kakhulu emaphephandabeni, lwahoxiswa yilo magazini wokuqala futhi lwaphinde lwashicilelwa komunye umagazini.
Uchungechunge lweColumbia Journalism Review olunezigaba ezintathu, ngoJuni 2013, “Science Media Centers and the Press”
I-CJR ingxenye 1: "Ingabe I-UK Model Isiza Izintatheli?"
I-CJR ingxenye 2: "Asebenza kanjani ama-SMC ngesikhathi senhlekelele yenuzi yaseFukushima?"
I-CJR ingxenye 3: "Ngabe iSMC ingasebenza e-US?"
Nature, ngu-Ewen Callaway, Julayi 2013, “Abezindaba zesayensi: Isikhungo sokunakwa; UFiona Fox neScience Media Center yakhe bazimisele ukuthuthukisa ezokunyathelisa zaseBrithani. Manje imodeli isakazeka emhlabeni wonke ”
Nature, nguColin Macilwain, “Izizwe ezimbili zihlukaniswe inhloso eyodwa: Izinhlelo zokuphindaphinda iScience Media Center yaseBrithani e-United States zigcwele ingozi”
I-FAIR, ngu-Stacy Malkan, ngoJulayi 24, 2017, "Reuters vs. Un Cancer Agency: Ingabe Izibopho Zenkampani Zithonya Ukutholakala Kwezesayensi?"
SciDevNet, nguMićo Tatalović, ngoMeyi 2014, “Isikhungo Sezindaba Sezindaba sase-UK sibhebhezela ukuphusha isayensi yezinkampani” Isikhungo semvu
Ukubuka kwe-PR, nguRebekah Wilke, ngo-Ephreli 2014, "IScience Media Center Spins Pro-GMO Line"
Kwiqembu elihlobene i-Sense About Science:
I-Intercept, ebhalwe nguLiza Gross, ngoNovemba 2016, “Seeding Doubt: Yeka indlela abazibeke ngayo abaqaphi 'besayensi ezwakalayo' befaka esikalini embonini.”
Ishidi Leqiniso le-USRTK: I-Sense About Science-USA Director uTrevor Butterworth Spins Science for Industry
Ishidi Leqiniso le-USRTK: IMonsanto Ithembele Kulaba 'Ozakwethu' Ukuhlasela Ososayensi Abaphezulu Bomdlavuza
Uphenyo lwethu Bayer, I-BioIndustry Association, Ugwayi waseMelika waseBrithani, Burson-Marsteller, ukuphepha komakhalekhukhwini, I-CFS / ME, Inhlangano Yezimboni Zamakhemikhali, Coca-Cola, ICornell Alliance yeSayensi, ICropLife International, UDick Taverne, Dupont, ExxonMobile, UFiona Fox, ukukhwabanisa, UGeorge Monbiot, GMO, umkhakha, Isikhungo Semibono, UKate Kelland, Kraft, Ukuphila kweMarxism, Umagazini we-LM, Monsanto, Isivivinyo sePACE, UFiliphu Morris, Umenzeli we-PR, Ikhomishini Yezikhalazo Zabezindaba, I-PRIMA Yurophu, Iqembu Lezinguquko LamaKhomanisi, Isikhungo Sasebukhosini, I-Royal Society, Isayensi Media Center, Umuzwa Ngezesayensi, shell, Isikhungo Sokucwaninga Ngezinkinga Zomphakathi, I-Spiked Magazine, UTracey Brown, UTrevor Buttorworth, UK